सुचना-प्रविधि – Eranimahal
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो एघार महिनामा विभिन्न देशबाट नेपालमा ३८ अर्बभन्दा बढीको मोबाइल फोन भित्रिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार २०७८ साउनदेखि २०७९ जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा
लुम्बिनी प्रदेशको ३० प्रतिशत क्षेत्र अझै विद्युत विहीन
लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत पुगेको छैन । विद्युत विहीन रहेको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिने बताइएको छ । १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा
फोनको प्याटर्न र पासवर्ड भुल्नुभयो ? यसरी खोल्नुहोस्
व्यक्तिगतदेखि व्यवसायिक जीवनसम्ममा मोबाइल फोन अहिले अनिवार्य आवश्यकता र दैनिक जिवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । आज हामी आफ्नो स्मार्टफोनमा विभिन्न निजी र गोप्य चिजहरूसमेत सम्हालेर राख्दछौं । आफ्नो फोन
नेपालमा थ्रीजीभन्दा फोरजी प्रयोगकर्ता बढी
सुरु भएको पाँच वर्षपछि पहिलो पटक फोरजी प्रयोगकर्ताको हिस्सा थ्रीजीभन्दा बढी भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभर एक करोड २८ लाख ६० हजार फोरजी प्रयोगकर्ता
ट्रुकलरमा रहेको गलत नाम कसरी परिवर्तन गर्ने ?
स्मार्टफोनको विकाससँगै यसमा प्रयोग हुने एप्लिकेसनहरूले हाम्रो आवश्यकताहरू सजिलै पुरा गर्ने गरेका छन्। यस्तै हामीलाई नम्बर खोज्न तथा कसैको नम्बर थाहा पाउन ट्रुकलरले निकै सहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको छ। ट्रुकलरको
अब फेसबुकबाटै पैसा कमाउन सकिने, के हो उपाय ?
काठमाडौं – फेसबुकले आफ्ना सेवाग्राहीका लागि खुसीको खबर ल्याएको छ। कम्पनीले फेसबुक ग्रुपका लागि मनिटाइजेसन फिचर ल्याउने तयारीमा छ। फेसबुकले यसका लागि नयाँ टुलको टेस्टिङ गरिरहेको छ, जसमार्फत ग्रुप एड्मिनले
सोसल मेसेजिङ प्लाटर्फम ह्वाट्सएपले एक नयाँ फिचर प्रयोगकर्तामाझ ल्याउँदैछ । उक्त फिचरसँगै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटविना नै ह्वाट्सएप चलाउन पाउनेछन् । यसमा प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएपलाई कुनै डिभाइसमा जोड्नका लागि स्मार्टफोनमा अनलाइन राख्नु आवश्यक
फेसबुकले नाम परिवर्तन गरेर बनायो मेटाभर्स
प्रविधि कम्पनी फेसबुक इंकले आफ्नो कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मेटा बनाएको छ। कम्पनीले सामाजिक सञ्जालभन्दा बढी भर्चुअल रियालिटीजस्ता क्षेत्रमा आफूलाई विस्तार गरिरहँदा नयाँ नामले आफूले गर्ने गरेको कामलाई विस्तृतमा समेट्ने
६ घण्टा फेसबुक बन्द हुनुको कारण के हो?
काठमाडौं–विश्वव्यापी रूपमा अवरोध झेलेको झण्डै ६ घण्टापछि फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामका पुनः सञ्चालनमा आएको फेसबुकले जनाएको छ । यी तीन वटै सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक कम्पनीका हुन् जसलाई वेबसाइट र स्मार्टफोन
सामसुङ ग्यालेक्सी एस २१ स्मार्टफोन : यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । सामसुङले आफ्नो ग्यालेक्सी एस २१ सिरिजका स्मार्टफोन लञ्च गरेको छ । एक अनलाइन इभेन्ट मार्फत् सामसुङले ग्यालेक्सी एस २१, ग्यालेक्सी एस २१ प्लस र ग्यालेक्सी एस २१ अल्ट्रा
काटिएका शारीरिक अङ्ग आफै जोडिने,घाउ पनि चाँडाे निकाे हुने
एजेन्सीहरुकेा सहयाेगमा – अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकले एउटा यस्तो ‘स्टेम सेल’ मूल कोशिका ) पत्ता लाएका छन् जसमा पुनरुत्पादन क्षमता ( रिजेनेरेटिभ एबिलिटी ) हुन्छ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई ‘स्मार्ट स्टेम सेल’ भनी
‘सामुदायिक रेडियाे मदनपाेखरा संकटकाे साथी’
पाल्पा – सामुदायिक रेडियो मदनपोखराले कोभिड १९ को महामारीका कारण आर्थिक सामाजिक संकटका बीचमा पनि श्रोताको हित र समुदायको रुपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । सामुदायिक रेडियो मदनपोखराले आज
चन्द्रमाबाट ढुंगा ल्याउन नासाले एक डलर दिने !
अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले एक कम्पनीलाई चन्द्रमाको सतहबाट चट्टान ल्याउनका लागि एक डलर भुक्तान गर्दैछ । लुनार आउटपोस्ट नामक उक्त कम्पनीलाई नासाले हालै चन्द्रमाबाट ढुंगा ल्याउने ठेक्का दिएको हो ।
ह्वाट्स एपमा एक दिनमै १ खर्बभन्दा धेरै मेसेज आदान-प्रदान
फेसबुक स्वामित्वको मेसेजिङ प्लाटफर्म ह्वाट्सएपमा एक दिनमै १ खर्बभन्दा धेरै मेसेजहरु आदानप्रदान हुने गरेका छन् । फेसबुक सिइओ मार्क जुकरबर्गले कम्पनीको त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वज्निक गर्ने क्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन्